समफलता का सुत्र हरु - Page2of2-
By hari July 29, 2019 No Comments
साना शिशुको स्यहारसुसारमा जति धेरै सर्तक हुनुपर्छ, उत्तिनै उनीहरुको खानपानमा पनि । शिशुको खानपानमा निकै संवेदनशिल हुनुपर्छ । उनीहरुको शरीरको समग्र विकास भइसकेको हुँदैन । त्यसैले जस्तोसुकै खानेकुरा पचाउन सक्दैन । उनीहरुलाई सहजै पचाउन सक्ने र पोषिलो खानेकुरा आवश्यक हुन्छ । त्यसो त शिशुको सर्वोत्तम भोजन आमाको दुध नै हो । यद्यपी कतिपय आमाको दुध […]
अंगुरलाई सुकाएर किशमिश बनाइन्छ । यसमा आइरन, पोटाशियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र फाइबरको पार्याप्त मात्रा हुन्छ । यसकारण यसलाई स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । तर आयुर्वेद अनुसार दैनिक किशकिशको साटो यसको पानी पिउँदा धेरै फाइदाजनक हुन्छ । भारतका आयुर्बेद एक्सपर्ट अबरार मल्तानीका अनुसार किशमिसमा गुलियो मात्रा बढि हुने भएकाले रातभरी यसलाई भिजाएर राख्दा यसको गुलियो […]
‘हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले, साग र सिस्नो खाएको बेस आनन्दी मनले’ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका यी पंक्तिमा मात्रै सीमित रहेन अहिले सिस्नोको चर्चा । कुनै बेला गाउँघरमा दुई छाक खानाको जोहो गर्न नसक्नेहरूले समेत तुच्छ खानाको रूपमा लिने गरेको सिस्नो अहिले शहरका ठूला–ठूला डिपार्टमेण्ट स्टोर, तारे होटल, रेष्टुँराहरूमा महँङ्गो खानाको परिकारमध्येमा पर्न थालेको […]
तालीले फाइदा गराउने केही सूची हेर्नुहोस् १. रोग प्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि तालीले मानिसमा रोग प्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि गर्छ र कुनै पनि रोगसँग लड्न सक्ने बनाउछ । २. ढाड, घाँटी, जोर्नी दुख्नेहरुका लागि ढाड, घाँटी, जोर्नी दुख्नेहरुले दैनिक १५ देखि २० मिनेटसम्मको अभ्यास गरेमा समस्याबाट लाभ मिल्छ । यसका लागि औंलाले औंलामा जोड दिनुपर्छ । उपयुक्त विधिले चाँडो परिणाम […]
शताब्दियौंदेखि मानिसहरू पीपलको रुखको पूजा गरिरहेका छन् । धर्तीमा भएका रुखमध्ये यसैले सबभन्दा बढी अक्सिजन फाल्छ । यसले चौबीसै घन्टा अक्सिजन दिन्छ । पीपलले हामीलाई अनेकथरी रोगबाट बचाउँछ । यसका सुकेका पात, सुकेका फल, जरा र बीजले समेत शरीरलाई फाइदै फाइदा गराउँछ । आउनुस्, यसका फाइदाका बारेमा जानिराखौं । १. स्वास प्रस्वासमा कठिनाई स्वासप्रूवास सम्वन्धी […]
अहिले गर्मीको मौसम छ । यो मौसममा आफूलाई स्वस्थ र फिट राख्नका लागि हामीले धेरै कुरा गर्नै पर्दैन । केही सामान्य कुरामा ध्यान दिन सकियो भने गर्मीबाट सहजै पार पाउन सकिन्छ । गर्मीबाट बच्ने केही काइदा यस्ता छन् । – सफा तथा स्वच्छ पानी प्रशस्त मात्रामा पिउनुपर्छ । – दही, लस्सी, मोही, जुस, राइता तथा […]
By hari June 29, 2019 June 29, 2019 1 Comment
यदि कुनै युवतीको दोष जान्नु छ भने उसको प्रशंसा उसको साथीको सामुन्नेमा गर । बेन्जामिन फ्रयाङ्कलिन आफ्नो दोष खोजेर निकाल्नु नै ज्ञानवीरको काम हो । स्वामी विवेकानन्द आफ्नो जतिसुकै गल्ती भए पनि मानिस उनान्सय प्रतिशत अवस्थामा आफूलाई दोषी देख्दैन । डेल कारनेगी अरुको दोषमा ध्यान दिदाँ हामी आफूलाई भलाद्मी देख्छौँ । तर जब हामी आफ्नो […]
By admin June 29, 2019 1 Comment